CHAMPIONS LEAGUE (Group D): Bayern Munich oo ku bar-baratay FC Rostov iyo Atletico Madrid oo dirqi uga baxsatay PSV..+SAWIRRO – Gool FM
CHAMPIONS LEAGUE (Group D): Bayern Munich oo ku bar-baratay FC Rostov iyo Atletico Madrid oo dirqi uga baxsatay PSV..+SAWIRRO
Byare September 13, 2016
(Europe) 13 Sebt 2016. Group D ee Champions League Bayern Munich ayaa 5-0 uga adkaatay kooxda yar ee FC Rostov halka Atletico Madrid ay si diriq ah uga baxsatay PSV Eindhoven.
Qeybtii hore ee kulanka Bayern Munich iyo FC Rostov ayaa lagu kala maray 2-0.
Robert Lewandowski ayaa dhaliyay rigoore lagu galay daqiiqadii 28-aad, waxaana goolka labaad u dhaliyay intaan la marin qeybta hore daqiiqadii 45-aad dhaliyahooda reer Germany ee Muller kubbad bannanka loo soo dhigay ayuu ku taabtay.
Markii la isku soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta Joshua Kimmich ayaa labo gool is raacsaday daqiiqadii 53-aad iyo 60-aad waxaana goolka shanaad u saxiixay Bayern Munich Juan Bernat.
Dhanka kale Atletico Madrid ayaa 1-0 uga adkaatay PSV.
Goolka qura ee ciyaarta ayaa waxaa la dhaliyay qeybta hore waxaana u saxiixay Saul Niguez daqiiqadii 43-aad, labo daqiiqo uun kaddib PSV ayaa heshay rigoore saxnaanshaheedu shaki ku jiray waxaana ka khasaariyay Andres Guardado.
KULANKA ATLETICO MADRID: